Ala Jack 3t | EPONT
Ahịa US 3T , dị elu dị mma, ngwaahịa agafeela OA, GS& Asambodo tuv nke European Union. Ogo ngwaahịa anyị bụ eziokwu na ntụkwasị obi. A na-ere ha nke ọma na ahịa ndị Europe na nke America. Ngwaahịa niile na-eji ọgwụ mgbochi kompeni gburugburu ebe obibi na - 45 Celsius hydraulic, yabụ enwere ike iji ha na mpaghara oyi. Biko tụkwasị obi anyị Epont. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ elont, anyị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma